သင်မသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အံ့ဖွယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ | MyFood Myanmar
သင်မသိသေးတဲ့ ဘီယာရဲ့ အံ့ဖွယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
လူအများစုက ဘီယာဆိုရင် ဘုရားမကြိုက်တဲ့ အရာလို့ မြင်ကြပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ရှိချက်များအရ ဘီယာကို ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သာ သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကောင်းကျိုးများ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယမကာဖြစ်တဲ့အတွက် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို မသောက်တတ်ရင်တော့ ဘေးဖြစ်တတ်တာလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
ဒါဖြင့် သင့်တင့်မျှတအောင် ဘယ်လိုသောက်ရမလဲ ? အဖြေကတော့ တစ်ပတ်မှာ ဘီယာ (၁၄) ခွက်ထပ် ပိုမသောက်သုံးသင့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ရက်မှာ ဘီယာအေးအေးလေး (၁) ခွက်ကနေ (၂) ခွက်အထိ ပုံမှန်သောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးများစွာရနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီယာသောက်ခြင်းအပေါ် သင့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် ဘီယာရဲ့ အံ့ဖွယ်ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
(၁) နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးတယ်
ဘီယာကို ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သောက်သုံးသူတွေဟာ ဘီယာလုံးဝမသောက်သုံးသူတွေထက် နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးပါတယ်။ Cambridge တက္ကသိုလ်နဲ့ လန်ဒန်ကောလိပ်တို့မှ UK မှာရှိတဲ့ လူငယ် ၁. ၉၃ သန်းကျော်အား လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရာ ဆေးဝါးဖြစ်သောက်သုံးခြင်းဟာ အလွန်ကြုံသောက်သုံးခြင်းထက် နှလုံးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ ခံစားရနိုင်ခြေ နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ ကြပါတယ်။
Figure 1 အလွန်ကြူးသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသော်ငြားလည်း ဆေးဝါးဆိုင်ရာသုတေသနများအရ လုံးဝမသောက်သုံးခြင်းဟာလည်း ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူ မဖြစ်စေပါဘူး။ အဓိကကတော့ စဥ်းစားချင့်ချိန်ပြီးသောက်သုံးတတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဆီးချိုရောဂါ ဒုတိယအမျိုးစား ဖြစ်ပွားခြင်းကို ဟန့်တားပေးတယ်
ဒီအချက်ကတော့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဘီယာရဲ့နောက်ထပ်ကောင်းကျိုးတစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်လူမျိုးတို့အား ယေဘုယျကျသော လေ့လာစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ တစ်ပတ်တွင် ဘီယာ (၁၄) ခွက်သောက်သုံးသော အမျိုးသားများနှင့် တစ်ပတ်တွင် ဘီယာ (၉) ခွက်ခန့် သောက်သုံးသော အမျိုးသမီးများဟာ ဘီယာ လုံးဝမသောက်သုံးသူများထက်စာရင် ဆီးချိုဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ထပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အသစ်တွင်မူ တစ်နေ့တွင် အရက်၂၄ ဂရမ် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးခြင်းကလည်း ဆီးချိုရောဂါ Type2အားဟန့်တားနိုင်ခြေ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
(၃) အချို့သော ကင်ဆာရောဂါများကို ပင်တားဆီးနိုင်တယ်
Figure 2- ဘီယာဗျစ်စေ့ပင်များဟာ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ရာတွင် အရေးပါသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်ပါတယ်။
ဘီယာတွင် Xanthohumol လို့ခေါ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Antioxidants များပါဝင်ပြီး ၎င်းကို ဘီယာဗျစ်စေ့ပင်များတွင် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ Xanthohumol က ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ရာမှာ အဓိကအခန်းကဏ္ဍ ကနေပါဝင်ပါတယ်။ သြစတြီးယား သုတေသနအသင်းတစ်ခုရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ Xanthohumol ဟာ မူမမှန်တဲ့ဆဲလ်များကြီးထွားခြင်းနှင့် DNA ပျက်စီးခြင်းတို့အား ဟန့်တာပေးနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကင်ဆာရောဂါအား ကာကွယ်ကုသမှုများတွင်လည်း အထောက်ပံ့ပြုသော Polyphenol များ ဘီယာတွင်များစွာပါဝင်နေတယ်။
(၄) အရိုးများကို အထူးသန်မာစေတယ်
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဘီယာဗျစ်စေ့ပင်များး နှင့် မုယောစပါးပါဝင်မှုမြင့်မားသော ဘီယာအမျိုးအစားများတွင် အရိုးများကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေတဲ့ ဆီလီကွန်ပါဝင်မှုမြင့်မားနေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုတွင်လည်း တစ်နေ့ကို ဘီယာ (၁)ခွက် သို့ (၂) ခွက်ပုံမှန်သောက်သုံးလေ့ရှိတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသော အမျိုးသားများနှင့် သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးများမှာ သူတို့နှင့် အသက်အရွယ်တူ ဘီယာ မသောက်သုံးသူများထပ် အရိုးတွင်းသိပ်သည်းဆ ပိုမိုမြင့်မားနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသော ဗျစ်စေ့ပင်များ နှင့်မုယောစပါးများကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ဘီယာအမျိုးစားကိုရှာနေရင်တော့ Carlsberg ကိုသာရွေးချယ်လိုက်ပါ။
(၅) ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးတယ်
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဆိုဒါသောက်သုံးခြင်းဟာ ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်တည်ခြင်းကို မြင့်မားစေနိုင်သော်လည်း ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကတော့ ကျောက်ကပ်တွင် ကျောက်တည်ခြင်းကို ၄၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ချပေးနိုင်ပါတ်။ ဘီယာတွင် ရေဓာတ် ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိမြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ အရက်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဥ်ဆိုင်ရာ အကြွင်းကျန်များကို စစ်ထုတ်ရာတွင် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ဆီး မကြာခဏသွားစေခြင်းကြောင့် ကျောက်ကပ်ကို သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။
(၆) မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်မြင့်မားစေပြီး စိတ်ခံစားချက်များကို ကောင်းမွန်စေတယ်
ဘီယာ (၁)ခွက်(၂) ခွက် သောက်သုံးခြင်းက သင့်အား ပိုပြီးစမတ်ကျစေရုံသာမက ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကိုလည်း မြင့်မားလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟော့ပ်မှာပါတဲ့ Xanthohumol ခေါ် Antioxidant တွေက မှတ်ဥာဏ်အားနည်းခြင်းဖြစ်စဥ်ကို လျော့ကျစေပြီး ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ထို ဓာတုဓာတ်ပစ္စည်းဟာဆိုရင် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဆိုင်ရာ ဦးနှောက်ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဘီယာသောက်သုံးခြင်းက ဦးနှောက်ထဲရှိ dopamine ဟော်မုန်းပမာဏကို မြင့်တက်စေတာကြောင့် သင့်ကို ပိုပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ခုအချိန်ဟာဆိုရင် Yoma ဘီယာအေးအေးလေးနဲ့ စိတ်အေးလက်အေးအနားယူဖို့ အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Figure 3- ဘီယာအေးအေးနဲ့ စိတ်အေးလက်အေးအနားယူနိုင်ဖို့ အခုပဲ Yoma ကို ဝယ်ထားလိုက်ပါ။
(၇) မကောင်းတဲ့ကို လက်စထရောတွေကို လျှော့ချပေးတယ်
သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကိုလက်စထရော ပမဏကိုလျော့ချချင်ရင်တော့ ဒီနေ့ကစပြီး ဘီယာ (၁)ခွက်(၂) ခွက်သောက်လိုက်ပါ။ ဘီယာမှာ ကိုလက်စထရော မပါဝင်ရုံသာမက ခန္ဓာတွင်ကိုယ်တွင်းက ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောပမာဏကို တိုပွားစေပါတယ်။ Beer သောက်ခြင်းဟာ သွေးကြောတွင်းရှိ Lipoprotein ခေါ် ကောင်းမွန်သောကိုလက်စထရောအမျိုးစားအား တိုးပွားစေပါတယ်။ ဘီယာမှာဆိုရင်အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားပြီး LDL ကိုလက်စထရောဟုခေါ်သော နှလုံးအတွက်ဘေးဖြစ်စေသော ကိုလက်စထရောဓာတ်တစ်မျိုးအားလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
(၈) ဘီယာဗိုက်ဆိုတာ ဘီယာကြောင့်ဖြစ်လာခြင်း မဟုတ်ပါဘူး
ဘီယာသောက်ခြင်းကြောင့် ဗိုက်ပူလာတယ်လို့ခံစားရရင် သေချာပြန်စဥ်းစားစေချင်ပါတယ်။ အများစုသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဘီယာကိုဆေးဝါးဖြစ်သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ဘီယာဗိုက်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ရုံသာမက မသောက်သုံးသူများထပ်ပင် ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျ နေတတ်ပါတယ်။ဘီယာဟာ ကိုယ်တွင်းဇီဝဖြစ်စဥ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေပြီး အဆီဓာတ်များစုဝေးခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်တာကြောင့် ပိုမို ကျန်းမာ စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးဝါးဖြစ်သောက်သုံးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့သင့်လျော်တဲ့ Diet ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
(၉) ဘီယာသောက်ခြင်းက အသားရေကိုပိုမိုလှပစေတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်များတိုးပွားစေတယ်
ဘီယာသောက်ခြင်းဟာ သင့်ကိုပိုမို လှပလာစေနိုင်လားဆိုရင်တော့ အဖြေက ဟုတ်တယ်လို့ ဖြေရမှာပါပဲ။ ဘီယာမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်ဓာန်များဟာ ဝက်ခြံကိုကာကွယ်ပေးပြီး အသားရေကို ဝင်းပစေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဘီယာတွင်ပါရှိတဲ့ ဟော့ပ်နဲ့ မုယောစပါးတွေက ဆံပင်များကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး အဖုအကြိတ်များကိုလျော့ကျစေလို့ သင့်ကိုပို GLow ၊ ပိုကြည့်ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။
ဘီယာသောက်ခြင်းဟာ ဗီတာမင် E ကဲ့သို့ အသားရေအားကြည်လင်တောက်ပစေတဲ့ Antioxidant များအားတိုးပွားစေနိုင်တာကြောင့် ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် အရွယ်တင်နုပျိုစေနိုင်ပါတယ်။
(၁၀) ဘီယာသောက်ခြင်းက သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်
ပူပြင်းတဲ့တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာ ဘီယာအေးအေးလေးတစ်ခွက်သောက်ရတာလောက် အမောပြေစေတာမရှိဘူးဆိုတာ သင်သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်ဟာ သင်ထင်ထားတာထက် သိပ္ပံနည်းကျ အကြောင်းရာများပါဝင်နေပါတယ်။ သိပ္ပံပညာအရ ဘီယာသောက်လိုက်ခြင်းဟာ သင့်ကို မောပန်းနွမ်းနယ်မှုများပြေပျောက်စေရုံသာမက အမှန်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြနေသော အရာများရှိပါတယ်။ ‘
Figure 4- ဘီယာသောက်ခြင်းဟာ သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်တာ သင်သိပါသလား?
ဂျာမနီရှိသိပ္ပံပညာရှင်များဟာ ဘယ်လိုအစားသောက်မျိုးက ဦးနှောက်ရဲ့အချက်ချာကျတဲ့ နေရာမှာ ကောင်းသော လှုံ့ဆော်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်လဲ ဆိုတာကို မတူညီတဲ့အစားသောက်အမျိုးစား ၁၃ဝဝဝ တွင် ရှာဖွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ရာ ဘီယာကထိပ်ဆုံးတွင်ရပ်တည်နေကြောင်း အံ့သြဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဘီယာဟာ ဦးနှောက်ရဲ့အချက်ချာနေရာမှာ ကောင်းသောခံစားချက်များရစေတဲ့ Dopamine ဟော်မုန်းများ ပိုမိုထုတ်လွတ်ရန် လှုံ့ဆော်နိုင်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်များကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်လူသားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကလျို့ဝှက်ချက်ဟာ ဘီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘီယာကိုသင့်တင့်မျှတစွာသောက်သုံးရင်း ပိုမိုကျန်းမာပျော်ရွင်စရာနေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကို ဘယ်သူတွေရှောင်ကျဥ်သင့်လဲ ?
ဘီယာဟာ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်များအရ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးများပေးနိုင်သော်လည်း သူ့မှာအရက်ပါဝင်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် နို့တိုက်မိခင်များ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာရှိနေသူများအနေဖြင့် ဘီယာသောက်သုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဥ်သင့်ပါတယ်။
MyFood Myanmar2020-12-02T17:20:49+06:30October 28th, 2020|Health, Knowledge|